"Gabadhii aan la noolaa oo muddo i garaaci jirtay ayaa la xukumay" - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, BBC THREE/CENTURY FILM
Alex iyo Jordan
Weligeey ma illoobayo dhacdadii gabadhi aan la noolaa ee Jordan biyaha kulul madaxa igaga shubtay, iyada oo sii diyaarsatay jalmad biya kulul ay ku soo diyaarsatay inaga oo xilligaasi mudda seddex sana ah wada nooleyn.
Waxayna mar walba ii sheegi jirtay ayuu yiri Alex "inaan midabka cawl-ka ah aan soo xiranin, timaha sida aan u jarto oo ay wax ka sheegto iyo xadgudubyo kale oo aad u badan oo ay muddo sagaal bilood ah igu haysay".
"xilliga ay biyaha kulul igu shubtay jirkeyga oo dhan waxaa ku guntamay nabarro afka biya ku wato waxaanna xilligaasi dareemayey xanuun aanan weligeey horay u soo marin, marar badan ayaan ka codsaday iney ii oggolaato in aan qolka qobeyska tago si aan biya qabow u raadsado balse wey iga diidday".
"Runtii waxaan billaabay inaan niyad jab aad u weyn kala kulmo nolosha aan Jordan la noolahay markasta oo ay iga dareento inaan la noolaashaheeda ku faraxsaneyna xadgudubyadi ay caadeysatay ayey igu sii wadday ayuu yiri Alex."
Alex oo xadgudub ku sameeyneyso Jordan
Daraasad cusub oo lagu sameeyey fal dambiyeedyada ka dhaca England iyo Wales waxay caddeeynayaan ilaa iyo bisha March sanadka 2018-ka dad gaarayo 2 milyan oo qof oo ay da'doodu u dhaxeyso 16-59 jir ay la kulmeen xadgudubyo dhanka qoyska uga yimaada, iyada oo dadka xadgudubyada loo geystay seddex meelood meel ay yihiin ragga.
Sidoo kale, shantii qof ee dhalinyarada ahba mid ka mid ah xadgudub iyo jirddil ayuu la kulmaa saaxibkii ama saaxibaddii, iyada oo arrinta lalal yaabban yahay ay tahay xad gudubka ugu badan in lagula kaco ragga.
Booliska gobolka Wales wuxuu sheegay inuu sanadki 2017-kii ay soo gaareen 150,000 oo xadgudub oo ragga loo geystay, tiradaasina marka la barbar dhigo sanaddii 2012-kii ay tirada laba jibbaar kor u kacday.
Alex wuxuu sheegay "Gabadha uu la noolaa ee Jordan Worth iney kulmeen isaga oo 16 jir ah, xilli uu 2012-kii uu dhiganayey kulliyad, iyaduna ay dhiganeysay jamacad iyada oo jecleyd iney noqoto macallin farshaxan, bilihi ugu horreeyey xiriirkannaga wuu wanagsanaa oo wakhti aad u wanaagsan ayaan wada qaadannay balse wakhti yar kaddib waxay billaawday iney tirahdo halkeed aadday, maalin hebla yaad la joogtay iwm.
"Jordan waxay billaawday iney gabi ahaanba iga hor istaagto inaan saaxibbadeey iyo eheladeydaba xiriir la sameeyo, xataa waxay iga hor istaagtay inaan booqdo ama aan kala xiriiro facebook, cid dhibka i haysto aan la wadaagana ma helin".
Waxaasoo dhan waxaa iiga sii darnaa ayuu yiri "iney cunta ii diiddo taasoo keentay inuu miisaankeyga aad hoos ugu dhaco. waxaan isku dayay inaan dabeecadda qallafsan ee ay la soo baxday aan wax ka beddelo dulqaad badanna aan u muujiyo balse ma dhicin oo wax walba oo aan anigu sameeyo ama aan ku hadlo wuxuu iyada ula muuqday khalad oo dhibaata kale ii sii horseeda."
"Laba carruur ah ayaan iisu dhalnay wax weliba iney xilligooda isbeddelayaan ayan ku rajo weynaa, cabsida ugu weyn ee aan qabay ee igu kalliftay qof noocaasi iila dhaqmaya inaan la sii noolaado ayaa waxay ahayd cabsi an ka qabay haddii aan isaga dhaqaaqo dhibka ay aniga igu haysay iney carruurta ula jeesato."
Alex oo wiilkiisa la kulmay marki isbitaalka laga soo saaray
"Jeceylka aan u qabo Jordan iyo wakhtigii yaraa ee farxadda badnaa wuxuu noqday mid igu soo noqnoqda oo aan ku riyooda oo keli ah."
Dhibaatooyinkii maskaxeed ee soo socday muddo 18 bilood ah waxay iisu beddeshay mid jireed oo ila soo dersito. Waxayna bilowday iney toorri ii adeegsato maalin maalmaha ka mid ahna waxayba i gooysay halboowlaha dhiigga wada aad ayaanna u dhiig baxay iyaduna waxay igu lahayd maad iska dhimatid iyada oo weliba aad iigu jeesjeeseysa.
Haddana inta ay biyo aad u kulul soo karkarisay ayay igu shubtay aad ayaan u qayliyey, dadki jaarka ahaa oo qaylideyda maqlay ayaa booliska wacay, booliska ayaana iisoo gurmaday oo iga soo gaaray iyada oo damacsaneyd ineyba i disho waxaana la ii qaaday Isbitaal i noo dhawaa.
Alex xilliga dhakhtarka la dhigay
Dhakhtarka marka uu xaaladdeyda caafimadka uu baaritaan ku sameeyeyna wuxuu ii sheegay "haddii ay xaaladdeyda sidaa ku sii socon lahayd oo aan dhakhtarka la ila gaari lahayn 10 maalmood gudahood inaan dhiman lahaa."
Lixdii rag ahba midkood wuxuu noolashiisu la kulmaa nooc xad gudub ka mid ah balse 20-kii rag oo xadgudub loo geeysta mid ka mid ah ayaa dalbada in caawimaad lala soo gaaro.
"Alex gabadha uu la noolaa xadgudubyada ay ku sameeysay wax raalli gelin ah kama aysan bixinin, si kasta oo ay booliska su'aalo u weydiiyeenna uma muuqanin qof xadgudub geystay, hase yeeshee maxkamadda ayaa waxay ku xukuntay iney dambiile tahay, waxaanna rajeeynayaa in xukunka laga khafiifiyo ayuu yiri Alex."
Booliska oo baaritaan wado
"Arrinta ugu weyn ee iigu cabsida badneyd oo igu kalliftay inaan dhibkaasi oo dhan u samro waxay ahayd iney carruurteyda wax dhib ah soo gaaro balse carruurta xaaladdoodu aad ayey u wanaagsan tahay dhibaatadi aniga iyo hooyadood na dhex martayna saameyn weyn kuma yeelan ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey."